Dhibcaha: Minnesota Solar Challenge / Sundial Solar
Ku dhawaaqida Faahfaahin Dheeraad ah oo ku Saabsan Xallinta Cimilada iyo Minnesota loo siman yahay
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay ku faraxsantahay inay shaaca ka qaaddo inaanu kordhinayno diiradeena laba arrimood oo mudnaan leh: sare u qaadista xalalka cimilada iyo dhisidda degganaan caddaalad ah oo loo wada dhan yahay. Go'aankani wuxuu daba socdaa sii deyntayada Qaabka Istaraatiijiyadeed ee 2019-2021 iyo bilaha fikirka qoto dheer iyo qorsheynta.
Waxaan aaminsanahay in dhibaatada cimilada adduunka iyo kala-duwanaanshaha isir-nacaybka ee dalkeenna hooyo ay yihiin qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn maanta. Iyagu waa caqabado nagu khasbaya in aan wax ka qabanno deg-degga iyo kheyraadka ay u baahan yihiin, iyo mala-awaalka iyo kalsoonida badan ee ay u baahan yihiin. Waxaan kalsooni ku qabnaa in xalalku ay kobcin doonaan mustaqbalka bulsho iyo dhaqaale ee gobolkeenna, gobolkeenna, iyo meeraheena ku nool aan ku noolaanno himilada McKnight Foundation, taas oo ah horumariyaan mustaqbal keli ah, hal abuur leh, iyo mustaqbal ballaaran oo ay dadku iyo meeraha u soo baxaan.
Barnaamijyadeena Farshaxanka, Caalamiga ah, iyo Neuroscience dhamaantood waxay muhiim ugu yihiin buugaag deeqbixintayada, aasaaska barnaamijka 'Initiative'n Minnesota Initiative Foundation ayaa wali ah wadashaqeeyeyaasha istiraatiijiyadeed ee gobolka oo dhan. Farshaxanno fara badan iyo ururo farshaxan oo aan taageerno ayaa durba safka hore kaga jira dhismaha Minnesota loo siman yahay, waxaanan sii wadi doonnaa inaan wax ka baranno oo aan dhexgalno fikradahaas. Intii lagu gudajiray kala guurka Aasaaska, waxaan fileynaa in barnaamij kasta iyo waax walba ay sii wadi doonto laqabsashada, maadaama aan had iyo jeer raadineyno qaabab sida ugufiican looga faa iideysto kheyraadkeena iyo inaan noqono hay'adda ugu waxtarka badan ee suurta galka ah.
Dardargelinta Tallaabada Cimilada
Cimilada markay tahay cimilada, saynisku wuxuu noo sheegayaa inaan haysano wax kabadan toban sano si aan uga hortagno dhibaatada weyn ee bini aadamka iyo carqaladeynta bulshada iyo dhaqaalaha ee daran. Shaqadeena ilaa maanta, waxaan ognahay in dhimista wasakheynta kaarboon ay hagaajiso caafimaadkeena, abuurto shaqooyin tamar nadiif ah, iyo kobcinta dhaqaalaheena.
Waxaan sidoo kale ognahay in Midwest ay tahay soosaarida lixaad ee ugu weyn adduunka ee qiiqa gaaska lagu koriyo - iyo haddii dunidu tahay in ay joojiso cawaaqib xumada ugu weyn ee isbeddelka cimilada, waxay u baahan tahay Midwest inay kaalinteeda ka qaadato.
In la sameeyo annaga qayb, barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta (MC&E) wuxuu leeyahay hadaf cusub: Action Qaado tallaabo geesinimo leh si aad si weyn u dhinto wasakhaynta kaarboon dhexdeeda bartamaha-galbeed marka la gaaro 2030. Si aan u gaarno himiladan cusub, waxaan labanlaabmi doonaa maaliyadeena saddexda sano ee soo socota, waxaan ku fidin doonnaa dadaalladayada Midwest, waxaanna u dhaqaaqnaa inaan gacan ka geysanno dejinta qeybaha badan ee dhaqaalaha. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku sii dhisi doonno heer ku habboon qaybta waaxda tamarta; bilaabaan inaad si xoog ah diiradda u saartid korantada warshadaha gaadiidka iyo dhisidda waaxyo leh awood nadiif ah; iyo in la hubiyo in lasocoto Kaarboonka, gaar ahaan dhulalka shaqada ee Bartamaha-Galbeedka.
Hadafyadeena cimilada ayaa ah hammi, iyo caawimaadda wada-hawlgalayaashayada, waxaan ku rajo weynahay inay macquul yihiin. Wax dheeri ah baro ku saabsan sababta tallaabada geesinimada leh ay muhiim ugu tahay aragtideena shaqada ka socota Aimee Witteman, oo ah madaxa barnaamijka MC&E.
Dhiirrigelinta Cadaalad iyo Sinnaan Minnesota
Si loo hormariyo sinaanta iyo ka mid noqoshada gobolka Minnesota, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno hadafkan cusub: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Barnaamij cusub oo bulshada-ku wajahan, kaas oo ku biirin doona qeybo badan oo ka mid ah barnaamijyadii hore ee Degmooyinka & Jaaliyadaha (R&C) iyo barnaamijyada waxbarashadda, waxaan kala shaqeyn doonnaa jaaliyadaha sidii gobolkeena looga dhigi lahaa mid u shaqeeya dhammaan deggeneyaasheeda - adkeynta suurta galnimada reer Minnesota guud ahaan isirka, dhaqanka, qowmiyadda, dakhliga, juqraafi, iyo kala duwanaansho kale. Barnaamijkani wuxuu ku dhisi doonaa shaqo dheer oo muhiimad u leh yoolalkayaga cusub, halka loo furi doono meel fikir isku dhafan iyo dariiqooyin lagu horumarinayo Minnesota oo aad u caddaalad badan.
Waqti markii gobolkayaga gobolka Minnesota uu si joogto ah ugu tiirsan yahay mid ka mid ah kuwa ugu xun farqiga u dhexeeya isir-nacaybka, waxaan arki karnaa mustaqbal halkaas oo dadka midabka leh iyo dadka asalka u ah - ee ay tahay inay ku lug yeeshaan caqabadaha hay'ad iyo nidaam - ay ku kasbadaan oo ay awood ku yeeshaan, ku horumariyaan dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba, oo si buuxda uga qaybqaato nolosha bulshada. Baro wax badan oo ku saabsan qaabkeenna caddaaladda qoraalkan waxaa qoray Kara Inae Carlisle, oo ah kuxigeenka barnaamijyada.
Sida aan u horumarinay xeeladeena cusub, ma jiri doonaan wareegyo codsi bilow ah oo barnaamijyada R&C iyo Waxbarashada ah. Kuwa leh deeqdii horey loo ogolaaday ma arki doonaan wax isbedel ah oo ku yimaada deeqdaas - waan xushmeyneynaa dhamaan deeqaha horey loo ogolaaday si deeq bixiyadeena ay u sii wataan shaqadooda muhiimka ah.
Codsiyada deeqda ee horay loogu casuumay ee howsha socda waxaa dib loogu eegi doonaa hagida hada jirta, iyadoo go'aanada la gaarayo dhamaadka sanadka 2019. Kuwa dib u cusbooneysiinta sanadka 2020 waxay xaq u yeelan karaan muddo hal sano kordhin ah halka Mu'asasada ay horumarineyso tilmaamaha barnaamijka cusub. Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhawaaqno tilmaamaha barnaamijkaan cusub ee jaaliyadaha marka la gaaro deyrta 2020, waqtigaas oo deeq bixiyeyaasha ku habboon shuruudaha laga dalban karo maaliyad cusub.
"Tani waa waqti isbeddel leh, ee loogu talagalay labadaba McKnight iyo adduunkeenna - waa waqti u baahan ficil hammi leh, rajo wanaagsan, iyo karti laqabsashada si wax looga qabto baahiyaha deg degga ah."
Barnaamijka Kala Guurka
Go'aankeenna qorsheynta ugu adag, marka loo eego mudnaanaha kale ee istiraatiijiyadeed ee kale iyo baahida loo qabo in la mideeyo baaxadda iyo diiradda, waxay ahayd in qorrax dhaca loo diro barnaamijka Mississippi River. Ku dhawaad 30 sano, barnaamijkani wuxuu ka shaqeeyey soo celinta tayada biyaha iyo adkeysiga webigan weyn. Waxaan qiimeyneynaa shaqada iskaashatada waxaanan ku faraxsanahay horumarka la taaban karo ee ay sameeyeen. Magaalooyinka kor iyo hoos webiga waxay dib ula qabsadeen horumarinta wabiga dhinaceeda, beeraleyda waxay ku sii wanaajinayaan dhaqan galinta hal abuurka leh hammi cusub, shirkadaha shirkadaha beeraha ee ku jira saadka sahayda ayaa qaadaya tabo badan oo biyo waarid ah. Gabagabadii barnaamijkan, waxaan rajeyneynaa inaan u dabaaldegno shaqadan muhiimka ah waxaanan u mahadcelineynaa dhammaan intii nagala qayb qaadatay dadaalkan.
Waxaan fahamsanahay in qaar badan oo ka mid ah asxaabteena iyo shuraakadayada ay la yaabi doonaan waxa ay ka dhigan tahay warkan iyaga. Inta lagu jiro kala guurka, shaqaalaha barnaamijka 'McKnight' waxay diyaar u yihiin inay taageeraan deeq-bixiyeyaasha oo ay uga jawaabaan su'aalaha sida ugu wanaagsan ee ay karaan. Waan soo dhoweyneynaa jawaabtaada oo si taxadar leh ayaan u dhagaysan doonnaa. Waxaan sidoo kale u diyaarinay si dhammaystiran bogga websaydhka macluumaadka waxaanan kugu casuumay inaad soo gudbiso su'aalaha iyo jawaab-celinta.
Warar kale, guddiga agaasinka McKnight wuxuu gudoonsiiyay 130 kaalmo oo wadarta ku dhawaad $ 28.4 milyan marka loo eego rubuc seddexaad ee sanadka 2019. Waxaan soo dhaweynay xubnaha cusub ee shaqaalaha Marwo Marx, Funlola Otukoya, iyo Taylor Coffin, waxaanan ku amaanaynaa macsalaameyn ay u hayaan howlwadeenka barnaamijka Nan Jahnke.
Tani waa waqti isbeddel leh, ee loogu talagalay labadaba McKnight iyo adduunkeenna - waa waqti u baahan ficil rajo leh, rajo wanaagsan, iyo karti laqabsashada si loo daboolo baahiyaha degdegga ah. Waxaan ka jawaabeynaa baaqa isbedelka, waxaan rajeyneynaa inaad sidoo kale adiguna sameyn doontid.
Waxaan sugeynaa inaan iskaashi la sameyno la-hawlgalayaasha hadda iyo kuwa cusub ee ka socda qeybaha bulshada, bulshada, iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Haddii aan rajeynayno inaan aragno mustaqbal ay dadku iyo meerahayadu ku najaxaan, waa inaan sameynaa wax kasta oo suurtagal ah si aan u dardar-galno howlaha cimilada oo aan horay ugu marinno sinnaanta midab-takoorka iyo is-dhexgalka. Sida aan ku nidhaahno Qaab-dhismeedkayada Istiraatiijiyadeed, waxaan la kulannaa xilligan rajo iyo geesinimo.
Iyada oo qayb ka ah ku dhawaaqidayaga ah inaan si qoto dheer u ballan qaadno laba meelood oo mudnaanta leh, waxaan bixinnaa tan video soo koobitaanka hadafkeena cusub ee hadafyada.
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Waxbarasho, Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, Gobolka & Bulshada, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah
McKnight wuxuu Balaadhinayaa Barnaamijka Dhex-dhexaadka Cimilada & Tamarta Midwest si loo Dardar-geliyo Xallinta Cimilada
By Aimee Witteman Sebtember 2019